I-EDEN Moscow Bodyrub • I-Body Rub ne-NuRu Massage
Hlikihla umzimba Izandla Ezine UNuru Slide
I-Eden Salon inikeza ukubhucungwa inkanuko eMoscow izinsizakalo ezitholakala kuwo wonke amadoda. Kungaba yi-classic endala enhle, egcwele amanothi omusa wasempumalanga, noma amasu anamuhla ahlanganisa amasiko wendabuko nenqubekela phambili. Olunye lwezinhlelo ezithandwayo lwenzeka eJacuzzi lapho kungezwa ukuthambisa kwamanzi afudumele kokuthintwayo okuthokozisayo. Kunezinketho eziningi zezinsizakalo, futhi amanani ancike ekugcwalisweni kwesikhathi nobude bohlelo. Siyaqiniseka: kusuka ezinhlobonhlobo zamasu, uqinisekile ukuthi ukhethe eyodwa ezokusiza ukuthi uphumule ngangokunokwenzeka futhi ulethe injabulo engeyona engokoqobo! Funda ngokucophelela konke okufakiwe ezinhlelweni ezihlongozwayo: sizamile ukuwahlukanisa, sigxile kuwo wonke amaklayenti angahle abe khona. Yingakho singaqinisekisa ngokuphepha: ngokuqinisekile uzothola isipho esifanele esivumela ukuthi ukhohlwe ngokuphelele ngezinkinga ezikhona futhi sithathe ngale kwemingcele yenjabulo yenyama.
Ukubhucungwa umzimba nge-erotic kowesilisa waseMoscow Russia isipho esihle kunazo zonke! Kunzima ukuphonsela inselelo lokhu! Hlela kusihlwa esingenakulibaleka sesithandwa, umngane, noma osebenza naye. Ukulungiselela isimanga esinjalo kulula kakhulu. Sibheka ukuthi uku-oda ukubhucungwa okuvusa inkanuko eklabhini yethu akubizi kakhulu, kepha indawo okuyo ilula kakhulu. Sibheke phambili ekwamukeleni esalon yethu!
IBol'shaya Spasskaya Ulitsa, Moskva, Russia, 129090